12 विश्व मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरु | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप > 12 विश्व मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरु
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 28/01/2022)
तारा अन्तर्गत नेत्रहीन प्राचीन थिएटरबाट अचम्मको र रमणीय हलहरू, यी 12 यदि तपाईं वास्तवमै सब भन्दा राम्रो कन्सर्टको अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने विश्वका सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरू उत्तम हुन्छन्. संघाई, बर्लिन, लन्डन, र इटली तपाईंको अर्को लाइभ संगीत कन्सर्टको आनन्द लिनको लागि केवल केहि राम्रा ठाउँहरू छन्.
रेल परिवहन भएको इको-मैत्री मार्ग यात्रा हो. यस लेखमा बचत एक ट्रेन द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ, द सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइट संसारमा.
1. विश्व मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरु: लन्डनमा रोयल अल्बर्ट हल
विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध रानीहरू द्वारा एक खोलिएको, रानी भिक्टोरिया, लन्डनमा रोयल अल्बर्ट हल, संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध संगीत स्थलहरु मध्ये एक हो. तपाईले भित्र पस्दा तपाई तत्काल सहमत हुनुहुनेछ कि यो वास्तवमै शाही हो. सजावटबाट वातावरणमा जब बत्तीहरू बाहिर छन्, यहाँ कन्सर्टले तपाईंलाई goosebumps दिनेछ.
देखि 1871 सबै शैली को संगीत प्रशंसक, रोयल अल्बर्ट हलको लागि उपस्थित हुनुहोस् 365 दिनहरू. त्यसैले, तपाईं ज्याज हो कि, चट्टान, वा शास्त्रीय संगीत फ्यान, रोयल अल्बर्ट हलमा एक प्रत्यक्ष संगीत कन्सर्ट एक अनुभव हो जुन तपाईं मिस गर्न चाहनुहुन्न जब लन्डनमा हुन्छ. रोयल अल्बर्ट हल दक्षिण केन्सिington्टनमा छ, र ट्यूब द्वारा सजीलो पहुँचयोग्य छ.
2. लन्डनमा O2 क्षेत्र
हाम्रो मा दोस्रो सबैभन्दा राम्रो संगीत स्थल 12 विश्वको सर्वश्रेष्ठ स2्गीत स्थलहरू लन्डनमा ओ २ एरिना हो. यो युरोपको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष संगीत स्थानहरू मध्ये एक हो, र संसार, को लागि कोठा संग 20,000 दर्शक. यसबाहेक, मा 2008 यसले म्याडिसन स्क्वायर गार्डनको टिकट बिक्रीलाई पनि पार गर्यो.
प्रिन्स, Cirque du Soleil, एलिसिया कुञ्जीहरू, र ब्रिट अवार्डहरू, O2 Arena मा रमाईलो गर्न सकिने केही संगीत घटनाहरू मात्र हुन्. तपाईंले लन्डनको बीचमा यात्रा गर्नु पर्छ, ग्रीनविच, तर सबै भन्दा राम्रो संगीत अनुभव को लागी, यो झन्झेल पूर्ण रूपमा लायक छ.
3. विश्व मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरु: भियनामा Musikverein, अस्ट्रिया
उत्तम संगीत बक्सको रूपमा शिल्प गरिएको, लालित्य को एक प्रतीक, द Wiener Musikverein, वा संगीत संघ, यूरोप मा परम क्लासिक संगीत स्थल हो. भियनेस फिलरमोनिक्सको घर, संगीत हल क्लासिक मा डिजाइन गरिएको छ युरोपेली मन्दिर शैली, छतमा अपोलोको फ्रेस्कोससँग.
364 एक बर्ष दिन, संसार भर बाट संगीत प्रेमीहरु, एक मनमोहक र अविस्मरणीय संगीत अनुभव को लागी भियना यात्रा. आर्किटेक्चर को लागी धन्यवाद, ध्वनिकी, संगीत, स्थान, र वातावरण, को Musikverein को शीर्ष मा छ 12 संसारमा सबै भन्दा राम्रो संगीत स्थल.
4. इटालीमा भेरोना अरेना
द 12 विश्वको सर्वश्रेष्ठ स ven्गीत स्थलहरू केवल एक महाकाव्य ओपेरा प्रदर्शनको लागि उत्तम स्थान फिचर गर्नुपर्दछ. भेरोना अखाड़ा १ शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो, र अझै पनी आज तपाईले यो अडिग पाउनुहुनेछ, र दुनिया भर बाट ओपेरा प्रशंसक होस्टिंग.
भेरोना अखाड़ा खुला एयर स्टोन एम्फीथिएटर हो, र यसका पर्खालहरूले तपाईंलाई ग्लिडिएटरहरूको कथाहरू सुनाउनेछ र पप ब्यान्डको शब्दहरू कानाफूसी गर्नेछ. अण्डाकार आकारले लाइभ संगीत कन्सर्टको लागि इटालीको सर्वश्रेष्ठ स्थानहरू मध्ये एकको रूपमा भेरोना अखाडा राख्छ. ध्वनिकी, रातमा कार्यक्रम स्थल, यो युरोप मा सबै भन्दा विशेष संगीत स्थल को एक बनाउँछ.
5. बेइजि Inमा प्रदर्शन कलाका लागि राष्ट्रिय केन्द्र, चीन
अण्डा-आकारको, आधुनिक कला टुक्रा, प्रदर्शन कलाका लागि राष्ट्रिय केन्द्र बेइजि inको सबैभन्दा प्रभावशाली भवनहरू मध्ये एक हो. केन्द्र अद्वितीय फारम को अतिरिक्त, त्यहाँ वरिपरि एक कृत्रिम ताल छ.
प्रदर्शन कलाको लागि राष्ट्रिय केन्द्र चीन मा ओपेरा र प्रत्यक्ष कन्सर्टको आनन्द लिनको लागि उत्तम ठाउँ हो. यद्यपि, यदि तपाइँ परम्परागत चिनियाँ संगीत प्रदर्शन रुचाउनु हुन्छ भने, त्यसोभए कन्सर्ट हल राम्रो ठाउँ हो.
6. विश्व मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरु: फ्रान्स मा Nimes को एरेना
सब भन्दा पुरानो रोमन एम्फीथिएटर एक उल्लेखनीय संख्या को होस्ट गर्न सक्दछ 24,000 संगीत प्रेमीहरु. यो अद्भुत संगीत स्थल हरेक वर्ष हजारौं दर्शकहरु लाई आकर्षित गर्दछ, फ्रान्स मा केहि धेरै दिमाग उडाउने संगीत घटनाहरु लाई.
समकालीन किककि pop पपबाट हान्स जिम्मर, प्रत्यक्ष संगीत घटनाहरू in the Arena of Nimes are unforgettable. राती रंगीन बत्तीहरूमा भित्ताहरू सहित, ध्वनि प्रणालीहरू खुला छ – यहाँको कन्सर्ट साँच्चिकै विद्युतीकरण गर्दैछ.
पेरिस गर्न Nimes एक ट्रेन संग
मोन्टपेलियर एउटा ट्रेनको साथ नाइम्समा
मार्सिले एउटा ट्रेनको साथ नाइम्समा
एउटा ट्रेनको साथ नाइम्सलाई राम्रो लाग्यो
7. बर्लिनमा वन ग्रोने
ओलम्पिक पार्क मा स्थित छ पार्टी शहर बर्लिन, Waldbuhne एक खुला एयर एम्फीथिएटर हो. पर्ल जाम, बर्लिन फिलहारमोनिक, र टेलर स्विफ्ट विशाल संगीत स्थलमा कन्सर्ट प्रदान गर्ने केही कलाकार मात्र हुन्.
वाल्डडब्ने पहिलो पटक ओलम्पिक खेलहरूको लागि निर्माण गरिएको थियो 1934, तर त्यसबेलादेखि यो एउटा बन्छ 12 जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थल, र संसार. तपाईं भाग्यशाली मध्ये एक हुन सक्छ 20,000 व्यक्ति एक प्रत्यक्ष संगीत प्रदर्शन मा भाग, ज surrounded्गलले घेरिएको. यस उत्कृष्ट संगीत स्थानले धेरै बर्षहरूमा धेरै महाकाव्य कन्सर्टहरू आयोजना गरेको छ, त्यसो भए तपाईं जर्मनीको अर्को भव्य संगीत कार्यक्रममा सांगीतिक ईतिहासको अंश हुन सक्नुहुनेछ.
8. शंघाईमा युयुइन्टाang्ग, चीन
हाम्रो 12 सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थलहरूको सूची चीनको शीर्ष भूमिगत संगीत क्लबसँग पूर्ण हुँदैन. शंघाईमा युयिनताang संसारका अन्य संगीत स्थानहरू जत्तिकै ठूलो छैन, तर यो एक उत्तम हो.
यो घनिष्ठ छ, र एक प्रकारको, त्यसैले तपाईं एक महाकाव्य संगीत रात को लागी हो. विश्व भर बाट रक प्रशंसकहरु, अन्तिमको लागि उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ रक क्लबहरूको सूचीमा युइइन्टा club्ग क्लब छ 10 वर्ष. त्यसैले, योसँग सबैभन्दा प्रभावशाली बाहिरी अनुहार नहुन सक्छ, तर ध्वनि र भाइब्स तपाइँ बाउन्स बनाउँछ.
9. विश्व मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरु: साल्जबर्गमा Felsenreitschule, अस्ट्रिया
जब तपाईं टिकट बुक गर्दै हुनुहुन्छ साल्जबर्ग महोत्सव, जहाँ तिनीहरूले संगीतको ध्वनि शूट गरे – तपाईं यो संगीत स्थल अविश्वसनीय छ भनेर पक्का हुन सक्नुहुन्छ. द Felsenreitschule एक बारोक डिज़ाइन गरिएको संगीत हल हो, संग 96 मंच पछाडि आर्केडहरू.
संगीत प्रदर्शनको बखत, पर्खाल आर्केड रंग मा प्रकाशित छन्, दर्शकलाई अझ बढी मोहित पार्दै. तपाईंको संगीत प्राथमिकताहरूको बावजुद, अस्ट्रिया मा एक कार्यक्रम Felsenreitschule सबै इन्द्रियहरूको लागि एक घटना हो – ठ्याक्कै कसरी संगीतले कार्य गर्ने र असर गर्ने छ.
म्यूनिख साल्जबर्ग एक ट्रेनको साथ
भियना साल्जबर्ग एक ट्रेन संग
एउटा ट्रेनको साथ ग्राज सल्जबर्ग
लिन्जदेखि साल्जबर्ग एक ट्रेनको साथ
10. टोरमिनामा प्राचीन थिएटर, इटाली
क्यालाब्रियन तटलाई हेराई गर्दै, Taormina मा प्राचीन थिएटर ईसापूर्व तेस्रो शताब्दी ईसापूर्व ग्रीस द्वारा निर्माण गरिएको थियो. शानदार थिएटरको उद्देश्य उत्कृष्ट नाटकीय प्रदर्शन थियो.
समुद्र र भूमिहरूको रोमाञ्चक दृश्यहरूको साथ, तपाईं यो एक संसारमा सबैभन्दा आश्चर्यजनक-प्रेरणादायक संगीत स्थलहरू फेला पार्नुहुनेछ. त्यसैले, एक अर्केस्ट्रा कोठा को लागी, डान्सरहरू, गायकहरू, तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो प्राचीन थिएटर सूर्यास्त वा सूर्योदय प्रत्यक्ष संगीत घटनाहरूको लागि दर्शनीय स्थल हो.
11. शंघाईमा माओ लाइभहाउस
इलेक्ट्रोनिकबाट पप ट्यूनहरू, माओ Livehouse शंघाई मा सबैभन्दा ठूलो संगीत स्थल हो. त्यसैले, यदि तपाईं शंघाई रात्रि जीवन र संगीत दृश्यको सर्वश्रेष्ठ अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए माओ लाइभहाउस भनेको स्थानीयहरू र पर्यटकहरूको लागि आईटी ठाउँ हो.
माओ लाइभहाउससँग चीनमा सब भन्दा राम्रो ध्वनि प्रणाली छ, यो सब भन्दा राम्रो प्रत्यक्ष संगीत स्थल बनाउने, र आफ्नो कपाल तल र चट्टान राख्न को लागी जगह.
12. विश्व मा सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थानहरु: सुन्तलामा प्राचीन थिएटर, फ्रान्स
ओरेन्जमा रोमन थिएटर १ शताब्दी AD पछि संगीत प्रशंसक मनोरन्जन गरीरहेको छ. सुन्तलाको शहर मा स्थित छ, कन्सर्टहरू होस्ट गर्दछ, र फ्रान्स मा वार्षिक गर्मी ओपेरा उत्सव.
तपाईं एक हुन सक्छ 10,000 मानिसहरु युरोप मा सबै भन्दा राम्रो संरक्षित थिएटर मा एक अविस्मरणीय संगीत प्रदर्शन का आनंद. सुन्तला रंगमञ्च ट्रेन सवारी दूर मार्सिलेबाट, तर छोटो रेल यात्राले तपाईंलाई इतिहासमा फिर्ता लिनेछ, रोमन समयमा, र संगीत संसारमा सबै भन्दा राम्रो नाटकीय प्रदर्शन गर्न.
पेरिस देखि एक ट्रेन संग मार्सिलेज
एक ट्रेनको साथ पेरिसको लागि मार्सिलेज
एउटा ट्रेनको साथ मार्सेलिले क्लरमन्ट फेरेन्ड
मा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई तपाईंको अद्भुत छुट्टीको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 12 ट्रेन द्वारा विश्व मा सबै भन्दा राम्रो संगीत स्थल.
के तपाईं हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "विश्वमा १२ सर्वश्रेष्ठ संगीत स्थलहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3Dneاور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, र तपाईं / ja / ru वा / de मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र अधिक भाषाहरू.
BestConcertsEurope	BestMusicVenuesInTheWorld	कन्सर्ट	LiveMusicEurope	संगीत क्षेत्र	MusicVenues
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा जापान, ट्रेन यात्रा नर्वे, ट्रेन यात्रा रूस, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, यात्रा युरोप